कर्णालीमा २ हजार ७५५ जनाको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ
शिलापत्र संवाददाता जुम्ला, १० जेठ
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा परीक्षण गरिएका सबै स्वाबको रिपोर्ट नेगेटिभ देखिएको छ । साविक कणाली अञ्चलभित्र पर्ने ५ जिल्लामध्ये मुगु, हुम्ला, कालिकोट र जुम्लाबाट विभिन्न मितिमा संकलन गरेर परीक्षण गरिएका २ हजार ७ सय ५५ व्यक्तिको स्वाब पीसीआर परीक्षण गर्दा रिपोर्ट नेगेटिभ देखिएको हो ।
प्रतिष्ठान जुम्लाका निर्देशक डा. मंगल रावतले प्रतिष्ठानमा शुक्रबारसम्म सङ्कलित ती स्वाबको पीसीआर परिक्षण गर्दा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको बताए । भारत गएका तथा देशका विभिन्न स्थानमा रहेका स्थानीयवासी भित्रिने क्रम बढ्दै जान थालेपछि स्वास्थ्यकर्मीको टोली खटाएर स्वाब संकलन गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइएको डा. रावतले बताए ।
प्रतिष्ठानमै ४ सय २४, कालिकोटबाट ६ सय ९५, मुगुबाट ३ सय ५१, जुम्लाबाट ७ सय ८९, नेपाली सेना ७०, हुम्लाबाट ४ सय ८, पत्रकार १८ जनाको स्वाबको पीसीआर परीक्षण गरिएको हो । आरडीटी पोजिटिभ देखिएका हुम्ला नाम्खाका २ र मुगु खत्याड गाउँपालिकाका १ जनाको पीसीआर परीक्षणमा नेगेटिभ रिपोर्ट आएको छ । रासस
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ १०, २०७७, ०८:४७:००